Atirishada Akshara Haasan Ma Waxay Badalatay Diinteeda? | Filimside –
Atirishada Akshara Haasan Ma Waxay Badalatay Diinteeda?
Jul 30, 2017 - 5 Jawaabood
Atirishada Akshara Haasan waxaa aabo u ah Super Star Kamal Haasan halka ay walaalo yihiin atirishada caanka ah Shruti Haasan waxayna dhawaan abuurtay hadal heyn xoogan dhanka baraha bulshada.
Akshara Haasan ayaa la sheegay inay diinta badalatay ayadoo markii hore Hinduu ahayd haatana qaadatay diinta Buudiisam-ka ama Badistaha.
Akshara Haasan aabaheed Kamal Haasan ayaa ugu hambalyeeyay diinta ay badalatay wuxuuna yiri “Waan ku salaamay Akshara, Diintaada miyaad badalatay? Waan ku jeclahay xitaa hadii aad talaabadaas qaaday, kuna raaxeeso nolosha”
Akshara Haasan inkastoo baraha bulshada aabaheed ugu hambaleeyay inay Budista noqotay hadana atirishadaan mar saxaafada weydiisay waxay ku jawaabtay “Aniga Budista ma noqonin laakiin waan ka helay nolosha dadka Budistaha heestaan”
Waxayna sheegtay inaysan wax diin ah heesanin ama diin gaar ah waqtigaan ku xirneyn!”
Akshara Haasan Bollywood-ka ayay ka tirsan ayadoo sameesay filimada Shamitabh iyo Laali Ki Shaadi Mein Laaddoo Deewana sidoo kalena bisha August waxaa usoo bixi doono filimka Tamil-ka ah Vivegam oo ay la jileyso Ajith Kumar.
Waxaa Aqriyay: 2,813
waa sheydamad aan iman lahayn oo kufri kufri ku badalatay
Kamal Hassan muslim maaha miyaa isaga ?
Sxb kamal haasan muslim ma aha magacaasna waxaa u bixiyey Aabihiis Oo sababta uu ugu bixiyayna ay tahay Inay Aabihii Saaxiib weyn ay ahaayeen nin Kamal haasan la odhanjiray islamarkaasna muslin ah markaa Kamal haasan aabihii ayaa jeclaa ninkaas sxbkiis ah sidaas darteed ayuu ugu biciyey magacaas iswata. Re wax Muslinimo ah oo uu kamal haasan kan atooraha ahi ahaa ma jiro jiray oo
Isagaba hada kahorna sheegay in dad badan ay u heysteen inuu muslim yahay maadaama magacan wato
cajaa ib war gaaldan mulxidinta ah waxay diin ahystaan malaha waa iska noolyihiin waxaasan allah baa mahadleh muslim naga dhigay,,,